के नेपालमा जीन सिक्वेन्सिङ गरेर कोरोनाको ओमीक्रोन भेरियन्ट पत्ता लगाउने व्यवस्था छ? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के नेपालमा जीन सिक्वेन्सिङ गरेर कोरोनाको ओमीक्रोन भेरियन्ट पत्ता लगाउने व्यवस्था छ?
कमला गुरुङ आइतबार, मंसिर १२, २०७८, १८:१०:१५
काठमाडौं - कोरोना भाइरसको नयाँ रुप ओमीक्रोनका विषयलाई लिएर अहिले विश्वभर बहस सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको यो नयाँ म्युटेसनपछि थप अध्ययन र अनुसन्धान अगाडि बढीरहेको छ।
ओमीक्रोन भेरियन्ट सुरुमा दक्षिण अफ्रिकामा रिपोर्ट भएको थियो। त्यसपछि अन्य केही देशमा समेत यसका संक्रमित फेला परेका छन्। संक्रमित फेला परेपछि धेरै देशले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।
नेपालमा पनि यसको रोकथानम र नियन्त्रणका विषयमा छलफल अगाडि बढीरहेको छ।
कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरियन्ट नेपालमा देखिएको छ वा छैन? नयाँ संक्रमितमा यो नयाँ भेरियन्टको संक्रमण हो वा होइन? भनेर नेपालमा पत्ता लगाउन सकिने व्यवस्था छ त?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोनको जीन सिक्वेन्सिङ गरेर पत्ता लगाउन सकिने जनाएको छ।
दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोनको जीन सिक्वेन्सिङबाट पत्ता लगाउन सक्षम रहेको प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेश कुमार गुप्ताले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘जीन सिक्वेन्सिङबाट नयाँ भेरियन्ट पत्ता लगाउने हो। यो हाम्रो प्रयोगशालामा पनि हुन्छ। यसअघि पनि डेल्टा, गामा, काप्पा लगायत भेरियन्ट जीन सिक्वेन्सिङबाटै पत्ता लगाइएको हो। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार हामीसँग उपलब्ध छन्।’
सामान्यतया जीन सिक्वेन्सिङ भनेको भाइरसको जेनेटिक बनावटलाई डिकोट गर्ने परीक्षण हो। पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भाइरसको जीन शरीरमा छ÷छैन भनेर जाँच गरिन्छ भने सिक्वेन्सिङमा जीनको बनावटको अध्ययन गरिन्छ।
कोरोना भाइरसले आफ्नो जीनमा स–साना परिवर्तन गरिरहन्छ। जसलाई म्युटेसन भनिन्छ। धेरै जस्तो म्युटेसनले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। तर कहिले काँही म्युटेसनले भाइरसमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदिन्छ। जसमा भाइरस बढी संक्रामक हुन सक्ने, छिट्टै फैलिन सक्ने, भएका औषधि र खोपले काम गर्ने पनि हुन सक्छ। भाइरसको परिवर्तित स्वरुपलाई नयाँ भेरियन्ट भनिन्छ।
हाल दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको ओमीक्रोन पनि कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरुप हो। यो नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलन सक्ने क्षमता भएको र पुनः संक्रमण गराउन सक्ने भन्ने भनिएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनले बताए। यद्यपि यो भाइरस कति घातक छ र हाल भएका खोपले यसलाई रोक्न सक्छ÷सक्दैन भन्ने विषयमा अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘यो भाइरस छिटो फैलन सक्ने र पुनः संक्रमण गराउन सक्ने भन्ने आएको छ। तर कतिको घातक छ र खोपलाई छल्न सक्छ/सक्दैन भन्ने विषयमा अध्ययनकै विषय छ। खोपले पूर्ण रुपमा नभई यसको प्रभावकारिता घट्ने हो की भन्ने कुराहरु छ।’
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना नभएकाले पनि नेपालमा यो भेरियन्ट भित्रने जोखिम रहेको उनले बताए।